Nafaqo darrada, caafimaadka iyo deegaanka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Nafaqo darrada, caafimaadka iyo deegaanka
La Ururka Qaramada Midoobay ee Cuntada iyo Beeraha (FAO) iyo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) waxay ku dhawaaqday daahfurka shirkii labaad ee caalamiga ah ee nafaqada (CIN2) kaasoo ka dhici doona Rome 19ka ilaa 21ka Nofeembar, wuxuuna wax ka qaban doonaa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee waqtigeenna: sida dib loogu habeeyo dowladda. nidaamka nafaqo leh dunida inay la kulmaan saddexda caqabadood ee ugu waawayn qarniga XNUMX-aad?
Caqabada koowaad, qayb weyn oo ka mid ah dadweynaha dunida maanta waxaa haysa nafaqo daro. Saddex meelood meel carruurta ku nool waddamada soo koraya horumarinta miisaankoodu hooseeyo ama dib u dhacay kordhiyo. Laba bilyan oo qof ayay saameeyeen cilladaha ku jira nafaqeeyayaalka yar yar, iyo in kabadan 840 milyan ayaa la ildaran gaajo daba dheeraatay.
Caqabada labaad, dhibaatooyinka salud la xiriira ku filnaanshaha ama xad-dhaafka ah ee isticmaalkeenna, oo leh farsamooyin ah producción, isbadalka warshadaha ama qaybinta khaldan, badatay. Cayilka iyo culeys xad dhaaf ah waxay saameeyaan qiyaastii XNUMX bilyan oo qof.
El xad dhaaf ah dufanka ama sonkorta, haraaga sunta cayayaanka ee cuntada, isticmaalka sii kordhaya ee nafaqada ayaa noqotay ifafaale weyn hami bulsho Aan la tirin dhibaatooyinka seguridad nadaafad taas oo disha kudhowaad seddex milyan oo qof sanad walba adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Nafaqo darrada, caafimaadka iyo deegaanka
Mashruuca Nadiifinta Badweynta si loo nadiifiyo badaha